Haleellaa Mooxaa: 'Namootni shan gocha kana hooggananiiru jedhaman to'atamaniiru' - BBC News Afaan Oromoo
Madda suuraa, Sabaa himaa naannoo Amaara
Naannoo Amaaraa Godina Goojjaam Bahaa magaalaa Mooxaatti haleellaa Masjidotaafi qabeenya hordoftoota amantichaarra qaqqabe namootni karoorsafi dursaa turan jedhaman shan qabamuu kominikeeshiniin naannichaaibsa kaleessa kenneen beeksisee ture.
Ganama kana sabaa himaan naannoo Amaaraa hoogganaa qajeelcha Poolsii Godinichaa Inispeektar Ayyaalneh Tesfaay waabeffachuun akka gabaasetti ammo lakkoofsi namoota shakkiin to'annoo jala oolanii 15 gaheera.
Ibsa daayireektarri waajira kominikeeshinii Naannoo Amaaraa obbo Geetinnat Yirsaaw kaleessa kennaniin''Haleellaan Jimaata darbe Masjiidotafi qabeenya hordoftoota Amantichaarratti raawwatame, hordoftoota amantaa lameenii barootaaf jaalalaafi tokkummaan waliin jiraachaa turan walitti buusuuf kan kaayyeefate ture.'' jedhan
Uummatni Amaaraa daangaan, sabummaan, eenyumma isaatiinifi amantaan qormaatni isa mudachaa jiraa kan jedhan obbo Geetinnat, rakkoo kan babal'isuun uummata naannichaaf ajandaa dabalataa kennuun isa dadhabsiisuuf mala malameedha'' jedhan.
MM Abiy Ahimad haleellaa manneen amantii irratti raawwatu balaaleeffatan
Namaa fi qabeenyarra''miidhaan guddaan'' qaqqabe jiraachuu himanii, lubbuun namaa darbe akka hin jires ibsaniiru.
Haleellaa qaqqabe kana karoorsuun hooggananiiru namoonni jedhaman shan to'annoo jala oolaniirus jedhan.
Rakkoo nageenyaa dhalate kana tasgabbeessuuf qaamoleen nageenyaa bobba'uufi marii gaggeefamu eegaleen tasgabbiin bu'aa akka jirus himan.
Mooxaatti maaltu ta'e?
Naannoo Amaaraa Godina Goojjaam Bahaa magaalaa Mooxaatti Jimaata darbe manneen amantaa gubachuu jiraattonniifi qondaaltonni BBC'tti himan.
Jiraattonni dubbisne jalqaba mana amantaa Kiristaanaa Qulqulluu Goorgiisii keessatti ibiddi mul'achuu himanii ergasii booda masjiidonni akka gubatan himaniiru.
Masjiidota gubateef jiraattonni, polisiifi qondaaltonni dargaggoota himataniiru.
Masjiidonni gubatan Masjiida Jami'ul Heyraatiifi Masjiida Ayyar Maarafiyaa, Taallaaquu Masjiid jedhaman akka ta'e dubbatu jiraattonni dubbifne.
Mana Maree Bakka Bu'oota ummataatti bakka bu'aan Mooxaa Obbo Hayiluu Yaayyuu masjiidni lamaafi suuqonni gubataniiru jedhaniiru.
Komishinii Poolisii Naannoo Amaaraatti ajajaan qajeelcha ittisa yakkaa komaandar Jamaal Mokonniin akka mirkaneessanitti ammoo masjiidonni gubatan 3 dha.
''Tokko guutummaan guutuutti gubateera, lama immoo hamma tokko balaa ibiddaan miidhamaniiru,'' jedhan.
Kanneen kana raawwatan ibidda naanoo bataskaana Goorgisitti mudate erga dhaamsanii booda namoonni gareen socho'ani masjiidota irratti haleellaa akka raawwatan himan.
Ministirri Muummee Itoophiyaa Abiy Ahimad gocha kana balaaleffataniiru.
''Itoophiyaa daandii badhaadhinaarra jirtu keessatti adeemsa finxaalessummaa waldanda'uu amantiifi aadaa waliin jiraachuu faallessan bakka hin qabani,'' jechuun fuula Feesbuukii isaanii irratti barreessaniiru.
''Lammiilee Itoophiyaa nagaa jaalatan hundaan waliin jireenya keessan akka cimsattan waamichakoon dabarsa,'' jedhan.
Ministira Muummee Abiy Ahimad: 'Adeemsa finxaalesummaa cimseen balaaleffadha'
26 Fuulbaana 2021
Yeroo dhuma kan haaromfame: 27 Fuulbaana 2017
Somaaliyaatti haleellaa badanii balleessuun namootni torba ajjeefaman
Jarman nama Angelaa Merkel bakka bu'u filannoo har'aan ni murteessiti
Qondaalli waraanaa Ruwaandaa yakka duguuggaa sanyiin adabame mana hidhaatti du'e